Umatshini wokuHamba waManzi oLwandle, abaXhasi - Abavelisi beHoseyisi abaLwandle baseChina
Umbhobho weoyile yaselwandle
I-Dock Cago yeoyile yombhobho
Umbhobho wamanzi olwandle
Inkwili yeoyile yombane
Umzi mveliso weRabha yeFluid
Irabha Lay Flat Hose
Mainline ngwenya Hose Wit ...
Umgca ophambili wombhobho
Tank Iinkuphelostencils Hose
Umbhobho weSamente owomileyo
Ukukhutshwa kombane weDredge
Ulwakhiwo kunye nezixhobo eziphambili zeCarass Main Lining / Tube yangaphakathi: Smooth, oyile kunye nefutha enganyangekiyo engenamthungo kunye ne-ExtrudedAcrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Uluhlu lwokhuseleko: ulwakhiwo olukhethekileyo ukunqanda iziphene okanye umonakalo owenziwe kukuqhekeka okanye ukonakala kwembonakalo yelinig ephambili; Ukuqiniswa kwakhona: IiPlies ezininzi zeTensile ephezulu yeTensile. Inxalenye yomnatha wocingo lwentsimbi yomzimba. Uqweqwe: Black Syntetic ngerabha Smooth oyile enganyangekiyo. Isidumbu esinye kunye nesidumbu esiDadayo esiDadayo ...
Half yokudada umbhobho kunye One End Ukomeleza
Ulwakhiwo kunye nezixhobo eziphambili zeCarass Main Lining / Tube yangaphakathi: Smooth, oyile kunye nefutha enganyangekiyo engenamthungo kunye ne-Acrylontrile-Butadiene-Rubber eyandisiweyo (NBR); Uluhlu lwokhuseleko: ulwakhiwo olukhethekileyo ukunqanda iziphene okanye umonakalo owenziwe kukuqhekeka okanye ukonakala kwempahla engaphezulu; Ukuqiniswa kwakhona: IiPlies ezininzi zeTensile ephezulu yeTensile. Inxalenye yomnatha wocingo lwentsimbi yomzimba. Uqweqwe: Ioyile emnyama yeRubber Smooth kunye ne-fuel resistant. Isidumbu esinye kunye nesidumbu esiphindwe kabini ...
Tanker Rail Floating Hose
Ulwakhiwo kunye nezixhobo eziphambili zeCarass Main Lining / Tube yangaphakathi: Smooth, oyile kunye nefutha enganyangekiyo engenamthungo kunye ne-Acrylontrile-Butadiene-Rubber eyandisiweyo (NBR); Uluhlu lwokhuseleko: ulwakhiwo olukhethekileyo ukunqanda iziphene okanye umonakalo owenziwe kukuqhekeka okanye ukonakala kwempahla engaphezulu; Ukuqiniswa kwakhona: IiPlies ezininzi zeTensile ephezulu yeTensile. Inxalenye yomnatha wocingo lwentsimbi yomzimba. Uqweqwe: Ioyile emnyama yeRubber Smooth kunye ne-fuel resistant. Isidumbu esinye kunye noMhlaba oMnyama oMnyama ...
Umsila odadayo kumbhobho
Ukunciphisa umbhobho odadayo
Ulwakhiwo kunye nezixhobo eziphambili zeCarass Main Lining / Tube yangaphakathi: Smooth, oyile kunye nefutha enganyangekiyo engenamthungo kunye ne-Acrylontrile-Butadiene-Rubber eyandisiweyo (NBR); Uluhlu lwokhuseleko: ulwakhiwo olukhethekileyo ukunqanda iziphene okanye umonakalo owenziwe kukuqhekeka okanye ukonakala kwembonakalo yelinig ephambili; Ukuqiniswa kwakhona: IiPlies ezininzi zeTensile ephezulu yeTensile. Inxalenye yomnatha wocingo lwentsimbi yomzimba. Uqweqwe: Ioyile emnyama yeRubber Smooth kunye ne-fuel resistant. Izinto ezidadayo: Kuvaliwe Iseli Foam. Ou ...
Itekhnoloji yerabha yehebhu Zebung co., Ltd.